15.08.2018 26.03.2021 admin Logiciels
Ho anao izay mampiasa smartphone "android", manasa anao hampiasa ireto applis maimaimpoana ireto izay tena hanampy anao be dia be tokoa amin'ny fitom Efa tsy hitako ao amin'ny play store intsony izy io efa ela dia ela izay, noho izany tsy misy mise à jour fa avy hatrany dia iny mandrakizay. Ezahako ihany ny hizara azy eto 2- Manaraka azy eo dia ny "Baiboly sy Fihirana Protestanta", izay ahitantsika ny baiboly protestanta amin'ny fiteny malagasy, fihirana ffpm, fihirana fanampiny, fihirana fifohazana sy vavaka samihafa.
Ity kosa dia amin'ny teny anglisy ny "interface" ary azo avadika teny frantsay ihany koa izy. Ny "modules" na ny baiboly dia azo télécharger-na mba ho azo ampiasaina na tsy misy connexion aza. Ny antony tena itiavako azy ity dia ny fisian'ny dikan-teny malagasy maro protestanta, protestanta nohavaozina, katolika ary diem izay samy azo télécharger-na avokoa.
Ankoatr'izay ny fananany plan de lecture na plan d'étude arakarak'izay lohahevitra mahaliana anao. Araka izany mila espace disque misimisy hampidirana ireo modules ireo. Ity farany ity, maivana ny interface kanefa misy modules maro dia maro. Misy amin'ny fiteny maro ny baiboly, ary ny baiboly protestanta ihany aloha no misy ao raha ny teny malagasy.
Ankoatr'izay kosa anefa dia manana dictionnaires bibliques, commentaires bibliques, atlas bibliques, boky vitsivitsy sy méditations vitsivitsy, misy version teny anglisy kjv izay miaraka avy hatrany amin'ny référence amin'ny teny hebreo sy teny grika. Maimaim-poana avokoa izany rehetra izany.
Tsy ho voavidy vola ny harena azoko tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo applications ireo, indrindra ity farany ity, harena be tsy hita lany. Tiako ihany koa ny hizara izany aminao. Mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'ny Tompo.